Waa maxay mawjad kululeyn? | Saadaasha Shabakadda
Xilliga kuleylaha heerkulka meelo badan oo adduunka ah aad buu u sarreeyaa. Tani waa wax aan wada qaadanay, laakiin mararka qaarkood kuleylka ayaa noqon kara mid xad dhaaf ah oo waliba soconaya dhowr maalmood, toddobaadyo iyo xitaa bilo.
Dhacdadan waxaa loo yaqaan hirarka kuleylka, waxayna ku yeelan kartaa cawaaqib xumo aad u daran caafimaadka iyo nolosha.
1 Waa maxay mowjadaha kuleylka?
2 Goorma ay dhacdaa?
3 Waa maxay cawaaqibta ay yeelan karto mowjad kuleyl ah?
3.1 Dabka kaynta
3.4 Isticmaalka awoodda
4 Hirarka kuleylka ugu muhiimsan
4.2 Hindiya, 2015
4.3 Yurub, 2003
4.4 Isbaanish, 1994
5 Tilmaamaha si aad ula qabsatid sida ugu macquulsan
Hirarka kuleylka waa a dhacdo heerkul aan caadi ahayn oo sarreysa oo soconaya dhowr maalmood ama toddobaadyo sidoo kale saameyn ku leh qayb muhiim ah oo juqraafiga waddan ah. Immisa maalmood ama toddobaad? Runtu waxay tahay in aanu jirin qeexitaan "rasmi ah", markaa way adag tahay in la caddeeyo inta ay le'eg tahay.
Isbaanishka, waxaa la sheegaa inay tahay mawjad kuleyl ah marka heerkul aad u sarreeya la duubo (qaadashada muddada 1971-2000 tixraac ahaan) ugu yaraan 10% saldhigyada cimilada ugu yaraan saddex maalmood. Laakiin runtii marinkani wax badan buu ku kala duwanaan karaa iyadoo ku xidhan waddanka, tusaale ahaan:
In Holland Waxaa loo tixgeliyaa mowjad kuleyl ah marka heerkulka ka sarreeya 5ºC la diiwaan geliyo ugu yaraan 25 maalmood De Bilt, oo ah degmo ka tirsan gobolka Utrecht (Holland).
In Mareykanka: haddii heerkulka ka sarreeya 32,2ºC la duubay 3 maalmood ama ka badan.
Goorma ay dhacdaa?
Waqtiga intiisa badan dhaca xilliga wareegga wareegga dhiigga, taas oo badanaa dhacda xagaaga. The Canicula Waa xilliga ugu kulul sanadka, waxayna dhacdaa inta u dhexeysa Luulyo 15 iyo Ogast 15. Maxaa loo yidhi waa maalmaha ugu kulul?
Waxaan u maleyneynaa maalinta ugu horeysa xagaaga (Juun 21 ee Waqooyiga Hemisphere iyo Diseembar 21 ee Koonfurta Hemisphere) waa maalinta ugu kulul, laakiin tan had iyo jeer maahan kiiska. Meeraha Dunida, sidaan ognahay, wuu isku shareeraa, laakiin sidoo kale wax yar ayuu u janjeeraa. Maalinta Xilliga Xagaaga, Falaaraha qorraxda ayaa toos noogu soo gaara, laakiin maadaama biyaha iyo dhulku ay hada uun bilaabeen inay nuugaan kuleylka, heer kulku wali wuu sii xasilloon yahay ama ka yar yahay.
Weli, in maadaama xagaaga uu sii socdo biyaha bada, kaasoo illaa hadda jawiga qaboojiyey, dhulkuna wuu kululaan lahaa si loo bilaabo xilli aad u kulul, taas oo noqon karta mid kacsan ama ka daran iyadoo kuxiran aagga aan ku nool nahay. Marka, tusaale ahaan, cimilada nooca Mediterranean-ka inta lagu jiro kuleylka mowjado kuleyl aad u kulul ayaa dhici kara.
Waa maxay cawaaqibta ay yeelan karto mowjad kuleyl ah?
In kasta oo ay yihiin ifafaalooyin dabiici ah oo aan wax kale u furan ahayn in aan isku dayno inaan la qabsanno sida ugu wanaagsan ee aan kari karno, haddii aynaan qaadin tallaabooyinka lagama maarmaanka ah waxaan la kulmi karnaa cawaaqibyadooda, oo aan yareyn.
Marka ay jiraan kuleyl kuleyl ah inta lagu jiro abaarta, keymaha ayaa halis weyn ugu jira in dab qabsado. Sannadkii 2003, Boortaqiiska oo kaliya, dabka wuxuu baabi’iyay in kabadan 3.010 km2 oo keymo ah.
Caruurta, waayeelka iyo kuwa jiranba waa kuwa ugu nugul mowjadaha kuleylka. Ku sii socoshada tusaalaha middii 2003, in ka badan 1000 dhimasho ayaa dhacday toddobaad gudihiis, iyo in kabadan 10.000 oo Faransiis ah.
Markay aad u kulushahay, niyaddayadu wax badan ayey isbeddeli kartaa, gaar ahaan haddii aanan la qabsan. Laakiin markay aad u kulushahay, haddii aan tallaabooyinka saxda ah la qaadin waxaan la kulmi karnaa istaroog kuleyl ama hyperthermia. Gaar ahaan kan ugu da'da yar iyo kan ugu da'da weyn, iyo sidoo kale kuwa buka iyo kuwa cayilan, ayaa ah dadka ugu halista badan.
Inta lagu jiro xilliga ugu kulul isticmaalka korontada ayaa cirka isku shareeraya, oo aan micno lahayn, waxaan u baahanahay inaan is qaboojino taasna waxaan ugu xirnaa marawaxadaha iyo / ama aan daarnaa qaboojiyaha. Laakiin tani waxay noqon kartaa dhibaato, sida isticmaalka oo kordha wuxuu u horseedi karaa koronto la'aan.
Hirarka kuleylka ugu muhiimsan
Mawjadaha kuleylka ee Yurub, 2003
Intii u dhaxeysay Janaayo 25 iyo 27, Chile waxay la kulantay mid ka mid ah mowjadihii kuleylka ugu xumaa taariikhda. Magaalooyinka Quillón iyo Cauquenes, qiimayaashu waxay aad ugu dhowaayeen 45ºC, diiwaangelinta 44,9ºC iyo 44,5ºC siday u kala horreeyaan.
Bishii Maajo, bilowgii xilliga qalalan ee Hindiya waxaa jiray heerkul aad u daran oo ka badan 47ºC, taas oo horseedday dhimashada in ka badan 2.100 qof illaa 31-ka bisha.
Kuleylkii 2003 wuxuu ahaa midka ugu muhiimsan reer Yurub. Kuleyl aad u sarreeya ayaa laga diiwaan geliyey koonfurta Yurub, qiimayaasha sida 47,8ºC ee Denia (Alicante, Spain), ama 39,8ºC ee Paris (Faransiiska).
Dhintay Dadka 14.802 inta u dhaxeysa 1-da iyo 15-ka Agoosto.
Intii lagu jiray usbuucii ugu dambeeyay ee Juun iyo kowda Luulyo, Isbaanishka, gaar ahaan gobolka badda Mediterranean-ka, heerkulku aad buu u sarreeyay, sida kuwa Murcia (47,2ºC), Alicante (41,4ºC), Huelva (41,4ºC), ama Palma (Mallorca) 39,4ºC.
Tilmaamaha si aad ula qabsatid sida ugu macquulsan
Marka uu jiro hirar kuleyl ah, waa inaad sameysaa wax kasta oo ay kugu qaadaneyso inaad la qabsato. Waa kuwan talooyin kooban oo kaa caawin kara:
Biyo qabow: Ha sugin ilaa aad u harraadan tahay inaad biyo cabto. Kuleylka xad-dhaafka ah, dareerayaasha ayaa si dhaqso leh u lumiya, sidaas darteed waa lagama maarmaan in jidhku helo biyo joogto ah.
Cun cunno cusub: intaad jeceshahay suxuunta kulul, xilliga kuleylaha iyo, wixii ka sarreeya, inta lagu jiro xilliga kuleylka, iska ilaali cuniddooda.
Geli shaashadda qorraxdaHaddii aad aadeyso xeebta ama socod, maqaarka aadanaha waa mid aad u xasaasi ah oo si fudud ugu gubi kara qorraxda.
Iska ilaali inaad banaanka u baxdid bartamaha maalinta: inta lagu jiro waqtigan falaadhku si toos ah ayey u yimaadaan, markaa saameyn weyn ayey ku leeyihiin dhulka iyo, sidoo kale, jirka.
Ka ilaali qorraxdaXidho dhar midab khafiif ah leh (midab khafiif ah ayaa ka tarjumaya iftiinka qorraxda), xidho muraayadaha indhaha, oo hoos joog hadhka si aad uga fogaato dhibaatooyinka.
Mawjadaha kuleylka ayaa ah dhacdooyin dhici kara sannad kasta. Waa muhiim in la ilaaliyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Waa maxay mowjadaha kuleylka?